Hamro Yatra | » तस्करलाई प्रहरीको स्कटिङ ! तस्करलाई प्रहरीको स्कटिङ ! – Hamro Yatra
> तस्करलाई प्रहरीको स्कटिङ !
तस्करलाई प्रहरीको स्कटिङ !
२४ वैशाख, काठमाडौं । लकडाउनका बेला निर्वाध ढुवानी सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने तातोपानी नाका तस्करका कारण तनाव सिर्जना भएको छ । खुल्ला प्रतिश्पर्धा भएपनि सिल्क ट्रान्सपोर्टका नाममा एकलौटी सामान ढुवानी हुन थालेपछि तनाव सिर्जना भएको स्थानीयले बताएका छन् । बाह्रविसे नगरपालिका ५ गातीका रमेश शेर्पाको स्वामित्वमा रहेको ट्रान्सपोर्टले मात्रै सामान ढुवानी गरिरहेका कारण स्थानीय अवरोध गरेका थिए । तर, स्थानीय प्रहरी,प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर ती गाडीहरु चेकजाँचसमेत नभए नेपाल भित्रिन थालेका छन् । तस्करीका सामान ल्याउने गाडीहरु निर्वाधरुपमा भित्रिन थालेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
अहिले नेपाल आइरहेको सामान सबै सिल्क ट्रान्सपोर्टले ल्याइरहेको छ । चिनियाँ मुसा भन्ने कम्पनी र बाह्रविसे नगरपालिकाका रमेश शेर्पासहित केहि नेपालीको आधा लगानी रहेको सो ट्रान्सपोर्टका धेरै कन्टेनर छन् । अहिले नेपालमा ल्याइने यहि कम्पनीको एकलौटी गरिरहेको छ । कन्टेनरहरु रातारात नेपालतर्फ सामान ल्याउन प्रहरीकै स्कर्टीङमा लागिपरेका छन् । अत्यावश्यक र आवश्यक सामान ल्याउन छुट सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाउँदै सूनको तस्करी व्यापक भइरहेको पनि स्थानीयले बताए । यी सामानहरु तिव्वतमा वा खासामा मात्र सेटीङ भएर आउने नभइ ग्वानजाओबाटै सेटीङ भएर आउने ब्यसायीहरु बताउँछन् ।
साविक गाती गाविसका रमेश बाह्रविसे नगरका मेयर तथा सिन्धुपाल्चोक नेकपा नेता निमफूञ्जो शेर्पाका भान्जा हुन् । सामान्य परिवारमा जन्मेका रमेशको अहिलेको आर्थिक अवस्था देख्नेहरु जो कोही पनि जिभ्रो टोक्ने गर्दछन् । सामान्य ब्यवसायी रमेशले एकाएक ठुलो आर्थिक फड्को मारेका छन् । महलभित्रै स्वीमिङपूल रहेको घरमा भूमिगत गोदाम रहेको आशंका गर्नेहरु धेरै छन् । चीनबाट भारत सामान पठाउँदा तीन पटक पक्राउ समेत परेका थियो । भारतको सिलगुढीमा रमेशमा भिनाजू १६ केजी अवैध सुनसहित पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै काठमाडौंको महाबौछमा पनि उनको भिनाजूको दाई २० केजी सुनसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरु तीन महिना जेल बसेर निस्किएका थिए । हुण्डी कारोवारमा पनि नेपाल प्रहरीले रमेशलाई खोजी गरेपनि उनका कामदारहरुमात्र पक्राउ परेका छन् ।
सुन तस्करीमा उनको नाम जोडिएपनि पहुँचका भरमा उन्मुक्ति पाउने र भरियामात्र पक्राउ पर्ने गरेका छन् । भोटकोशी गाउँपालिको तातोपानी नाका नजिकै निर्माण भईरहेको १६ दमलवल २६ क्षमताको हिमरिभर हाईड्रोमा दश करोडको शेयर लगानी गरेका शेर्पाको सम्पति छानविन गर्न सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई आग्रह गरेका छन् । हाईड्रोमा पहिले अध्यक्ष रहेका रमेशल अहिले अध्यक्ष छोडेर नेकपाका नेता सरलसहयात्री पौडेललाई अध्यक्ष बनाएका छन् । तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल र सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख प्रज्ज्वल महर्जनले रमेशको काममा सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन् । तर, प्रहरी प्रशासन भने आफूहरुले त्यसो नगरेको बताउँछ । ‘प्रहरी प्रशासनलाई सहयोगमा लिएपछि जे काम गरेपनि सजिलो हुने रहेछ ।’ रमेशले आफूसँग पटक पटक यस्तो अभिब्यक्ति दिने गरेको उनको एक स्थानीयले बताए ।
सिल्क ट्रान्सपोर्टमार्फत नेपाल ल्याईएको सामान अहिले पनि प्रहरी प्रशासनले चेकजाँच नगरी पठाउने गरेको छ । कोरोना भाइरस९कोभिड–१९० को संक्रमण भित्रने भन्दै भोटेकोशीका वडाध्यक्षले ज्ञापनपत्रमार्फत लिखित विरोध जनाएपछि चीनबाट ल्याइएका स्याउ र लसुन बोकेका कन्टेनर स्कटिङ गरेर ल्याईएको बताईन्छ । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको गाडी अघिपछि लगाएर कन्टेनर ल्याईएको छ । अति आवश्यक सामान मात्र ल्याउनुपर्ने भन्दै भोटेकोशी गाउँपालिकाका ४ जना वडा अध्यक्षले तातोपानी भन्सारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले स्वास्थ्य सामाग्री मात्र ल्याउन माग गरेका छन् । जबरजस्ती सामान ल्याएमा र संक्रमण नहुने ग्यारेन्टी नगरेमा आयातित स्याउ र लसुन नष्ट गर्ने चेतवानी वडाध्यक्षले दिएका थिए । उनीहरुले धम्की दिएपछि कन्टेनरलाई सुरक्षा दिएर बन्दरगाहमा प्रवेश गराइएको हो ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालन गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र अतिआवश्यक अन्य खाद्य सामाग्री ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही मौकामा तस्करीका सामान ल्याईएको ब्यवसायीहरुको भनाई छ । दाल, चामल, नुन आदी० ल्याएपनि लसुन र स्याउ ल्याउन नदिने जनप्रतिनिधिको भनाई छ । लसुन र स्याउ ल्याउँदा कोरोना संक्रमण हुने खतरा रहेको भनाई उनीहरुको छ । सामान ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि वडाध्यक्षहरुले प्रहरी स्कटिङको भिडियो नै सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरुले स्कटिङ नै गरेर सामान ल्याउँदा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताए ।